people Nepal » कोरोनासँग लड्ने क्षमता बढाउने उपायहरूः विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे कोरोनासँग लड्ने क्षमता बढाउने उपायहरूः विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे – people Nepal
कोरोनासँग लड्ने क्षमता बढाउने उपायहरूः विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे
Posted on March 3, 2020 by Purna Nanda Joshi
फल्गुण २०, २०७६ । पछिल्लो समय विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणले तीन हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालको छिमेकी देश चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरसले चीनमा मात्रै करिब ३ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ७५ हजार संक्रमित भएका छन् ।
१५– सरसफाइमा अल्छी नगरौँ